Shanduro dze beta dze watchOS 4 uye tvOS 11 yevagadziri yakaburitswa nhasi | Ndinobva mac
Iyo watchOS 4 uye tvOS 11 beta shanduro dzevagadziri dzakaburitswawo nhasi
Pamusoro peiyo beta 4 vhezheni ye macOS High Sierra isu tinewo pakati pedu mamwe ese ma beta vhezheni eIOS, watchOS 4 ne tvOS 11. Mune idzi shanduro nyowani pane shanduko dzine chekuita nekushanda, kugadzikana uye pamwe kugadzirisa bug sezviri muma macOS Yakakwira Sierra vhezheni. Shanduro dzese dzinowanikwa kune vashandisi vane account yepamutemo yekuvandudza, Parizvino, veruzhinji beta shanduro hadziwanikwe, asi tinotarisira kuti mumazuva mashoma vanozoonekwa pawebhusaiti yeApple.
Izvo zvitsva muwatchOS 4 zvinotarisirwa kunyanya mukuzvimiririra kwewachi inoita kunge iri mubeta 3 yaive ichikundikana zvishoma, pamusoro pezvo, madhizaina matsva anosanganisa mavara kubva kuToy Story uye nekuvandudza muSiri akawedzerwa, kuwedzera kune iyo yakatsaurwa nzvimbo yeinosarudzika kune mubatsiri. Iwo ekuvandudza haasati aonekwa uye mumaawa mashoma anotevera ivo vanogadzira vanenge vatove nemaficha avo ekutanga eiyo watchOS 4 yechina beta kugovana nekuvandudza kwakanyanya.
Nezve iyo vhezheni ye tvOS 11 beta Zvakanaka, kana isu takatoona zvishoma kupfuura kuitiswa kweAmazon Prime Vhidhiyo panguva yekuratidzwa keyword yakaitwa naTim Cook, panguva yeWWDC muna Chikumi wapfuura, sezvo isu tisingatarisiri nemoyo wese shanduko huru kana tichienzanisa neye beta vhezheni 3. Kazhinji mukuvandudza mune idzi shanduro dzakanangana nekukorobha ruzivo rwekuita, chengetedzo uye kugadzikana, saka hatitende kuti ivo vachawedzera maficha nyowani mune zvimwe zvinhu.
Ruzhinji beta vhezheni tvOS 11 yave padhuze kuvhurwa senge yeiyo macOS High Sierra neIOS 11, asi parizvino hatina kuwanikwa uye kana tikateerera nguva dzakapfuura inogona kunge iri mangwana kana Chitatu yatovepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Iyo watchOS 4 uye tvOS 11 beta shanduro dzevagadziri dzakaburitswawo nhasi
Tinogona kuve new Apple Watch munaGunyana
Ini ndiri kuMac, munokurudzira kutenga iyo MacBook Air nhasi?